Ku dhawaad 15 Maalin warkooda lama hayo guddigii xaqiiqo raadinta | KEYDMEDIA ONLINE
Ku dhawaad 15 Maalin warkooda lama hayo guddigii xaqiiqo raadinta
Guddigii uu Ra’iisul Wasaare Rooble, u xil-saaray soo baaridda cabashada waalidiin Soomaaliyeed ee carruurtooda la askareeyay ayaan warkooda la hayn ku dhawaad 15 malin oo ay magacaaban yihiin.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ku dhawaad 15 Maalin ayaa ka soo wareegtay markii Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble uu magacaabay guddi soo baara cabashada waalidiin Soomaaliyeed, kuwaas oo aan caruurtooda raq iyo ruux midna heyn in muddo ah.
12 June 2021, oo ku beegneyd markii la magaacaabay guddiga xaqiiqo radinta cabshada Waalidiinta, waxaa hadda laga joogo 13 cisho, mana jiro wax shaqo ah oo guddigu qabtay, isla-markaana uu la wadaagay bulshada.
Keydmedia Online, ayaa hore u tabisay in Rooble, u tafaxeytay marin-habaabinta, qaddiyadda dhalinyarada maqan, kadib markii uu magacaabay guddi, ay xubno ka yihiin qaar ka mid ah shaqsiyaadka u eedeysan kiiska askarta laga dagaal galiyay waqooyiga Itoobiya, ilaa haddana aan meel lagu sheegin raqdooda iyo ruuxooda.
Guddiga Rooble u magacaabay arrinkaan, waxaa ku jira Safiirka Soomaaliya u fadhiya Itoobiya, Cabdullahi Axmed Jaamac, iyo Taliyaha Ciidanka xoogga dalka, Gen, Odawaa Yuusuf Raage, oo ay qasab tahay in ay wax ka ogaayeen shirqoolkii loo maleegay dhalinyarada.
Rooble, Wuxuu iska indhatiray, magacaabidda guddi isku dhaf ah, oo lagu kalsoonaan karo, sida inuu min hal xubin ka soo magacaabo guddiga ay iska dhex doorteen waalidiinta, gudiyada ammaanka iyo xaquuqul iinsaanka ee labada gole ee Baarlamanka, Guddiga Arrimaha Dibadda ee BFS, Ururrada Bulshada iyo Axsaabta Mucaaradka.
Guddigaan oo la rumeysan yahay in aysan wax shaqo ka qaban doonin arrintaan, ayaa markii hore laga soo magacaabay xaafiiska Maxamed Cabdullahi Farmaajo, waxaana la soo marsiiyay xaafiiska Rooble, si aan xasaasiyad looga qaadin.
Waxaa jira guddiyo uu Rooble u xil-saaray soo baaridda arrimo muhiim ah, sida guddiigii loo diray in ay soo baaraan shirqoolladii ay Kooxda Farmaajo isku dayeen in ay ku laayaan siyaasyiin iyo shacab mudaharaad nabadeed dhigayay 19-kii Febaraayo 2021, kuwaas oo in ka badan shan bilood wali baaritaan ku maqan.
Guddiga uu Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble uu magacaabay soo baara cabashada waalidiin Soomaaliyeed, waxaa la aaminsan yahay inuu la mid noqon doono guddiyadii uu hore u magaacabay ee aan wali waxba ka soo naasa-caaddan.